Maamulka Degmada Qandala Oo Ka Hadlay Sida Ay Daacisha Ula Waregtay Degmadaasi – Xeernews24
Maamulka Degmada Qandala Oo Ka Hadlay Sida Ay Daacisha Ula Waregtay Degmadaasi
Dagaal-yahano ka tirsan ururka Daacish ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Qandala ee gobolka Bari , iyadoo uusan jirin wax dagaal ah oo ka dhacay degmada markii ay soo galayeen kooxdan.
Gudoomiyaha degmada Qandala Jaamac Maxamed Kuurshe oo la soo xiriiray warbaahinta gudaha ayaa sheegay in dagaal-yahanadan oo wata hubka noocyadiisa kala duwan ay si rasmi ah hadda gacanta ugu hayaan degmada Qanadala.
“Markii ay soo galeen degmada anteenadii bey jareen ,dadkii kuluumaysatada ahaana waa ay u diideen in ay badda aadaan, inkastoo markii danbe ay dib u fasaxeen , balse ilaa iyo hadda iyaga ayaa gacanta ku haya magaalada “ ayuu mar kale yiri Kuurshe.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in shacab badan oo degmada ku sugnaa ay qax bilaabeen ,iyaga oo adeegsanaya saxiimadaha kaluumaysiga ,waxaana uu xusay in saldhigyo ay ka samaysteen xaafado ka tirsan degmada Qandala.
“ Hadda meelo badan oo kamid ah degmada ayey ka taageen calanka Daacish ama ISIL , goobaha ay calankooda sureen waxaa kamid ah Saldhig-ga iyo waliba xarunta dowladda hoose “ ayuu xusay ,isaga oo tilmaamay in dhamaan-ba ay istaageen howlihii shaqo ee dowladda ee ka socday degmdaas.
Hogaamiyaha kooxdan Cabdul-qaadir Mumin oo haysta dhalashada Ingriiska ayaa dhawaan lagu daray liiska rag-ga uu Maraykanku raadinayo , waxaana in muddo ah isaga iyo koox uu hogaaminayo ay saldhigyo ku lahaayeen qaybo kamid ah gobolka Bari.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/images-5.jpg 168 301 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-26 18:09:252016-10-26 18:09:25Maamulka Degmada Qandala Oo Ka Hadlay Sida Ay Daacisha Ula Waregtay Degmadaasi
Safiirka Jabuuti ee Soomaaliya oo ka hadlay khasaaraha ka dhashay weerarkii... Ma Waxbaa iska badalay Siyaasadi ay Sl ka lahayd 6-daa Goobood ee Bariga degmadda...